“Diyaar ayaan u ahaa inaan ku biiro Manchester United, balse…” Robert Lewandowski – Gool FM
“Diyaar ayaan u ahaa inaan ku biiro Manchester United, balse…” Robert Lewandowski
Haaruun December 22, 2020
(Munich) 22 Dis 2020. Ciyaaryahanka kabtanka u ah xulka qaranka Poland ee Robert Lewandowski ayaa dhowaan ku guuleystay laacibka ugu fiican sanadka ee FIFA, waxaana uu waqti cajiib ah ku qaadanayaa kooxda Bayern Munich, balse waxaa jirtay xilli uu ku sigtay ku biirista kooxda Manchester United.
Bayern weeraryahankeeda ayaa qiray inuu wada hadallo la yeeshay macallinkii hore ee Manchester United, Sir Alex Ferguson, sanadkii 2012.
Lewandowski ayaa si joogto ah loola xiriirin jiray u dhaqaaqista garoonka Old Trafford intii uu ku sugnaa Borussia Dortmund oo uu afar koob kula guuleystay waayihiisii Signal Iduna Park.
Si kastaba ha ahaatee, wada hadalladii dhex maray laacibkan iyo Ferguson ma aysan noqon kuwa miro dhal ah, waxaana ugu dambeyn uu bilaash ugu biiray kooxda Bayern Munich xagaagii 2014.
“Kaddib sanadkeygii labaad ee Dortmund, waxaan wada hadalnay Sir Alex Ferguson” ayuu Lewandowski u sheegay France Football.
“Waxa uu doonayay inaan ku biiro Manchester United, anigana aad ayaan u xiiseynaayay, xitaa diyaar waan u ahaa ayaan dhihi karaa” ayuu hadalkiisa sii raaciyay gooldhaliyaha reer Poland.
Xiddigan ayaa xaqiijiyay inay kooxdiisii xilligaas ee Dortmund u diidday inuu kooxda ka tago, waxaana uu yiri: “Balse Dortmund iima aysan ogoleyn inaan ka tago, taasna ima aysan niyad jebin, waayo waqti wanaagsan ayaan ku qaadanayay Dortmund”.
Macallinkii Red Devils ee xilligaas ayaa markii uu ku hungoobay Lewandowski waxa uu la soo saxiixday Robin vs Persie, kaasoo ku hoggaamiyay inay Man United qaaddo horyaalkeedii 20-aad ee Ingiriiska.
32-jirkan ayaa 266 gool u dhaliyay Bayern Munich isagoo u saftay 307 kulan, waxaana fasal ciyaareedkii idlaaday uu kula guuleystay horyaalka Bundesliga, DFB-Pokal iyo tartanka Champions League, halka uu raacsaday abaalmrinta xiddiga ugu wanaagsan sanadka ee FIFA The Best.
Muxuu yahay qorshaha u deggan Arsenal haddii ay kooxdu u laabato heerka labaad ee Ingiriiska??
Xiddigaha Daqiiqadaha ugu badan ciyaaray 2020: Messi oo saddexda sare ku jira iyo Man United oo saddex laacib ku yeelatay 10-ka sare